Kaliya waxaan helay phone Android cusub (LG-P500 ah) toady. Waxaan kaliya uploaded 2000+ oo dhan aan xiriirada in Google via Google Apps socdaalka, oo ay si layaab leh u muuqday on my telefoonka. Ilaa hadda si fiican. Laakiin waxaa lagu kala soocaa ay magaca koowaad. Sidaasoo kale waxaa lay wada ah Yooxanaa oo dhan. Tani waa lawska. Sidee ayaan sidoo kale ka heli kartaa telefoonka ah in ay kala xiriiro ee la soo dhaafay si magaca.
Dhab ahaantii, waa ay fududahay in aad sort xiriirada Android by Magaca awoowe, ilaa iyo inta aad qabto tababare waxtar leh Android. Halkan waa mid ka mid ah adiga kuu wanaagsan. Taasi Wondershare MobileGo for Android (dadka isticmaala Windows). Sida user Mac ah, waxaad isku dayi kartaa Wondershare Mobilego u Android Pro (Mac) . Labada nooc oo barnaamijkan aad awood ah in ay kala xiriiro qalabka Android aad by Magaca awoowe si fudud oo dhaqso.
Download Tababaraha Android taasi inay kala soocaan xiriirada by waarta magaca Android.
Tilmaan buuxda oo ku saabsan xiriirada Android sort by Magaca awoowe
In ay qayb ka socda, waxaan hagi doonaan sida aad u xalliso xiriirada by Magaca awoowe la version Windows, ku odhan, Wondershare MobileGo for Android. Marka ugu horeysa, fadlan soo dajiyo Tababaraha this Android on your computer. Waxa maamula si ay u helaan suuqa kala xiriir.
Fiiro gaar ah: Fadlan hubi info ka faahfaahsan oo ku saabsan qalabka Android taageeray .
Tallaabada 1. Isku qalab Android si aad u computer ah
2 siyaabo waxaa laga heli karaa in lagu xiro qalabka Android si aad u computer ah. Waxaad sidoo kale ka dhigi kartaa xidhiidhka ka via cable USB ama WiFi. Ka dib markii lagu ogaan karo qalabka Android aad, tababaraha this Android muujin doonaa qalab aad Android uu furmo suuqa ugu weyn.
Fiiro gaar ah: Dadka isticmaala Mac, si aad u Mac xidhan karto qalab Android aad via cable USB ah.
Tallaabada 2. Sort xiriirada Android by Magaca awoowe
Hadda, guji saddexagalka hoos "Xiriirada" galeeysid bidix. Under xiriirada category yihiin dhammaan kooxaha xiriirka qalab Android aad. Dooro koox in aad rabto in aad xalliso magacyada xiriirrada '.
Ka dib markii in, ka dooro mid xiriir oo u dhiiba a double-click. Ama, guji "Edit" button on xaq. Daaqadda pop up xiriir ah, oo dhan info oo ku saabsan xiriir tani waxaa lagu muujiyey. Riix icon dhexeeya magaca hore iyo Magaca awoowe meeshooda ku dhajisan.
Hadda, magaca xiriir la kala soocaa by Magaca awoowe. Waxaa deg deg ah oo fudud, soo maaha? Ka sokow, waxa kale oo aad edit karaa info kale, sida lambarka taleefanka, cinwaanka email, cinwaanka guriga oo dheeraad ah.
Marka laga reebo kala sooca xiriirada Android magac waarta, waxaad samayn kartaa waxyaabo badan oo ay u maareeyaan xiriirada aad Android.
Xiriirada Import ka files vCard, Windows Live Mail, Windows Cinwaanka Kitaabka iyo Muuqaalka in qalab Android aad .
Dib ugu soo xiriiro si kombiyuutarka, Outlook, Windows Cinwaanka Book, Windows Live mail.
Midowdo xiriirada nuqul . Tababaraha Tani waxay kaa caawinaysaa in aad Android lagu ogaado oo ku milmaan oo dhan ama xiriirada dulicate xulay aad Android.
Saar xiriirada ka Android in Dufcaddii.
Sida loo Download Samsung Android Software
> Resource > Android > Sida loo ha Sort Xiriirada Android by Magaca Dambe